एकीकृत रहेको बस्ती पहिरोको कारण यत्रतत्र::Online News Portal from State No. 4
एकीकृत रहेको बस्ती पहिरोको कारण यत्रतत्र
बागलुङ, २२ असार – निसीखोला गाउँपालिका–१ हुल्दीमा तीन बर्ष अघिसम्म ठुलो गाउँ थियो । सबै मिलेर बस्थे, अर्मपर्म, मेलापात र जन्ती मलामी सबैका लागि पुग्थे । अहिले यो गाउँ छरीएको छ । केही बर्ष पहिलेसम्म मौरीको गोला जस्तो गाउँ अहिले यत्रतत्र भएको छ । पुरानो संगोल संझेर धेरैले गाउँ फर्कने चाहना राख्छन्, तर पहिरोले छिन्न भिन्न पारेको यो गाउँमा सबै फर्कन सकेका छैनन् । अझै यो गाउँभरिनै पहिरोको त्रास छ ।
‘चरचरी चिरिएको जमिन, दलदलेले जताततै भत्केका घरहरुले बस्ती छिरोल्यो । त्यो भन्दा धेरै गाउँलेहरुको मनहरु पनि भाँडिएका छन्’ निसीखोला गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष इन्द्रबहादुर मल्लले भने ‘हिउँदका महिनामा फर्कन खोज्ने गाउँलेलाई बर्षात लागेपछि पहिरोले अत्याउँछ ।’ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका–१ मा पर्ने हुल्दी गाउँमा पहिरोको त्रास चल्न थालेको पाँच दशकभन्दा धेरै भयो ।
५० बर्ष पहिले एक्कासी जमिन चर्किएर बारीका कान्ला, खेतका आलीहरु खस्न थालेपछि कहिले ठूला पहिरा त कहिले साना पहिराको सामना हुल्दीबासीले झेल्दै आएका छन् । २०७२ सालमा गएको भुकम्प र २०७३ को बर्षामा खसेको ठूलो पहिरोले हुल्दी छिन्न भिन्न भएको हो । त्यहाँका दर्जन बढी घरहरु विस्थापित भएको मल्लले बताए । त्यसपछि हुल्दीबासी बर्षा आउँदा त्रसिने गरेका छन् ।
कमजोर जमिनमाथी रहेको पुरै बस्तीनै जोखिममा परेको छ । हुल्दीमा अहिलेपनि ७० भन्दा धेरै परिवारको बसोबास छ । हिउँदमा घरमा बस्ने र बर्षातको समयमा गाउँभन्दा केही माथी बनाईएका गोठमा पुगेर रात काट्ने गरेको स्थानीय हुमकुमारी मल्लले बताईन् । ‘हिउँदमा त जसोतसो दिन काटियो, रात बिताईयो’ मल्लले भनिन् ‘आकास गर्जियो भने न निद्रा लाग्छ न भोक ।’ हुल्दीको पहिरो प्रत्येक बर्ष बढेर बस्तीको नजिक नजिक आउने गरेको छ ।
हुल्दीका स्थानीयले उचित व्यवस्थापनसहित बस्ती स्थान्त्रणका लागि बेला बेलामा आवाज उठाउने गरेका छन् । ‘हामीले स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म स्थानान्तणका लागि माग गरेका छौं’ मल्लले भनिन् ‘हाम्रो आवाज कस्ले सुन्छ र ।’ आँफैले घरखेत जोडेर ठाउँ छोड्न सक्ने आर्थिक क्षमता नभएको र सरोकारवालाले ध्यान नदिएका कारण जोखिम मोलेर चर्केको जमिनमा बस्नु परेको उनले बताईन् ।
हुल्दीको पहिरोले गाउँनै बगाउन सक्ने सम्भावना देखेर गत बर्ष निसीखोला गाउँपालिकाले भू–गर्भ विदहरुको समुह बोलाएर जमिनको अध्ययन गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभाग काठमाडौँकी सिनियर जियोलोजिष्ट (भूगर्भविद) मोनिका झा तथा अर्की भूगर्भविद सुनिता भट्टराईको टोलीले हुल्दीको पहिरोको अध्ययन गरेको थियो । उक्त समुहले तत्काल बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, अन्य बस्तीहरुलाई जोगाउनका लागि ठाउँठाउँमा चेकड्याम निर्माण गर्नु पर्ने बताएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताए ।
भूगर्भविदहरुले दिएको सल्लाहका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लामा कृयाशिल राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठकले पनु निर्माण गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणलाई यो बस्ती बिकासका लागि अनुरोध गरेको पौडेलले बताए । ‘सानो रकम र प्रयासले सम्भव हुनेजस्तो पहिरोको प्रकृति छैन्’ अध्यक्ष पौडेलले भने ‘प्राबिधिकको प्रतिवेदन सहितको अनुरोध केन्द्रमा पठाएका छौं प्रतिक्रिया आएको छैन् ।’ पहिरोको जोखिम खतरनाक देख्दा देख्दै आँफैले आँटेर केही गर्न नसकिएको पौडेलले बताए । ‘ठुलो बर्षा हुँदा सानोतिनो पाल दिएर सुरक्षित ठाउँमा बसाल्न सकिन्थ्यो’ पौडेलले भने ‘प्राधिकरणले गर्छ भन्ने विश्वासमा बसियो केही कार्यक्रम बनाउनै पाईएन ।’ केन्द्र र प्रदेशको आशा गर्दा स्थानीय तहले गर्न सकिने काम पनि नभएको पौडेलले गुनासो गरे ।